ITIL Vs PMP Certification? Inona no mety aminao? - Sekoly teknolojia
Ny safidin'ny PMP Certification (Project Management Professional) sy ny Certification Certification (Information Technology Infrastructure Library) dia safidy malaza. Ny Fanamafisana tsirairay dia afaka mametraka anao asa ambony amin'ny karama ambony iray.
Manomboka amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fanamarinana PMP. Rehefa manomboka hetsika ny asan'ny mpitsangatsangana mpiompy, dia mitaky fahalovana sy fahatokiana betsaka.
Na izany aza dia mety hanampy anao handroso haingana kokoa ny fivoahana amin'ny fandehanana tsara, azonao atao ny mijery izany rehefa manamarina ny fanamarinana PMP ny filaharam-baovaon'ny PMP ary manao zavatra tsy dia mitaky mihoatra noho ny eritreretinao. A ny sasany Ao amin'ny PMP dia manatsara ny fitantanana ny tetikasa amin'ny fitantanana ny tetikasa ary manosika anao hanana fahaizana tsara kokoa amin'ny fanaraha-maso kely kokoa sy ny fikarakarana ny tetikasa. Diniho ny tombontsoa tsara indrindra azonao amboarina amin'ny fanamarinana PMP.
Ny tsy fivoaran'ny tsy fahampiana eo amin'ny asa ataonao
Ny fandaharanasam-pitsarana PMP dia asa ankasitrahana manerana izao tontolo izao ary fantatra amin'ny vondrona tariby maneran-tany izany. Ao amin'ny sehatra IT, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia miambina amin'ny mpanara-maso antoka antoka PMP ary izany dia mety hanatsara kokoa ny habetsaky ny asa ambony kokoa noho izay hitanao.
Ny tsirairay ao amin'ny tontolon'ny orinasa dia mahafantatra tsara ny tombontsoa amin'ny fitantanana ny rafitra sy ny fampivoarana ny tombony amin'ny asa. Rehefa mamadika manam-pahaizana momba ny PMP ianao, dia manana fironana hifandray amin'ireo olona nanao ny fianarana sy ireo izay vao nahazo fankatoavana tamin'ny PMP. Izany dia azo antoka fa mampivelatra ny dokam-barotra sy ny marika miasa amin'ny maha-manam-pahaizana azy ary manome anao ny fahafahana handray ny tifitra ambony kokoa amin'ny fisafidianana asa bebe kokoa.
Tsy mora toy ny mihaino ny fahaiza-manao sy ny fitovizan-javatra toy izany koa ny tokony hiatrehanao fiomanana tsara. Misy koa ny tonon'asa mifandraika amin'ny fepetran'ny asa fampianarana. Mahazo fahafahana ianao mba ho vonona ary ankoatra ny mahasarika anao amin'ny fomba mahavariana fitantanana tetik'asa rafitra. Ny fampisarahana an'io fomba io dia mampiditra
Noho izany dia azonao atao ny mandray anjara amin'ity rafitra fitantanana ny tetikasa manaraka ity izay ahafahana manatanteraka ny teti-piasana amin'ny tetikasa fitrandrahana isan'andro ho fampiharana ny famonoana sy ny famonoana ny tetikasa.
Fampandrosoana ny Marketing
Hanana fahafahana hifantoka ireo fikambanana ambony eo amin'ny sehatra manerantany izay miasa manodidina ireo sehatra samihafa ianao, noho ny testamenta dia hanatsara ny fandrosoana anao ary hametrahana ny fihaonana ara-pitantanana ny tetikasa. Hifandray amin'ny olon-drehetra koa ianao, afaka mandray anjara amin'ny lahateny, ary ny fivoriana izay manampy azy ireo hahalala amin'ny alalan'ny fahaiza-manaonao.
Didy mba hahazoana vola tsara kokoa
Mazava ho azy fa midika izany fa ny fanomezan-dàlana PMP dia hanome anao fahafahana ho tale tetikasa ambony kokoa noho ireo olona tsy manana antoka. Rehefa mahazo ny mari-pahaizana ianao dia hanomboka hahita bebe kokoa hividy sy handoavana bebe kokoa.
Tetik'asa momba ny fahaiza-manaon'ny Corporate Level Manager
Izany dia omena tsy tapaka rehefa tonga miaraka amin'ny fanamarinana PMP ianao. Ny talen'ny tetikasa dia mila mifehy zavatra maromaro ary miompana amin'ny sehatra isan-karazany amin'ny tetikasa ary ny fisintonana ny fanamarinana PMP dia ampianarina amin'ny fanatsarana ny vokatra eo amin'ny fahaiza-miasa amin'ny lehiben'ny tetikasa.
Andeha hojerentsika tsotra izao fa amin'ny fampiroboroboana ny angon-drakitra, ny orinasa tsirairay dia andrasana hifanaraka amin'ny fampandrosoana. Nisy fahasarotana maro samihafa teo amin'ny fahaiza-manaon'ny Management of IT. Mba hiatrehana ny fahasarotana toy izany, ny hôtel fitantanana ny tranokala ITIL na IT dia nanomboka nanapa-kevitra tsara teo amin'ny raharaham-barotra. Ny marika ITIL dia misaraka eo amin'ny fototra ITIL, ITIL intermediate ary ny sehatra ara-pahaizana ITIL.
Mahaliana ny mari-pahaizana momba ny fanamarinana. Raha toa ka misy loham-pampahalalam-baovao miaraka amin'ny ITIL, dia izy dia tena handray anjara bebe kokoa amin'ny fikambanana iray satria azony atao ny manazava ny famonoana ny serivisy ary manatsara ny fitantanana ny angon-drakitra amin'ny fomba izay tsy takatry ny hafa. Ny fanamarinana ihany koa dia hanatsara ny fandrindrana ny fifandraisany amin'ny maha-manam-pahaizana manokana, ny mpitantana na ny mpanolotsaina na ny IT.
Amin'ny toe-javatra izay ahitana ny fanamarinana, dia manaporofo ny adidy am-pahatongavana ho an'ny olona ianao raha toa ka mijanona eo anoloan'ny olon-kafa ao amin'ny sehatra IT. Mampisy vokany tsara aminao izany. Rehefa vita ny fanamarinana ny ITIL, ny tantsaha dia manana tanjona mba hampianarina bebe kokoa, matihanina ary hahomby amin'ny famolavolana ny fomba fanao mifototra amin'ny fomba ambaran'ny IT manokana. Amin'ny fanamarihan'ny ITIL, dia manomboka miteny lahateny iray mahazatra eo amin'ny manampahaizana matihanina manodidina anao ianao ary manomboka miditra amin'ny tranonkala amin'ny rafi-pitantanana bebe kokoa sy ny famaritana bebe kokoa amin'ny fahaiza-manao IT.
Ny talen'ny sampana dia nomena ny mari-pahaizana momba ny teknolojia ary ny fampahalalam-baovao dia handeha ho any amin'ny farany izay tena manan-danja kokoa ho an'ny fikambanana tsirairay satria afaka mampifanaraka tsara ny angon-drakitra rehetra ao aminy. Ny fanaovana toy izany, raha toa ka manana fahafahana hanamarina ny vanim-potoanan'ny fihetsiketsehana sy ny fifandraisana ao anatin'ny fikambanana ary miaraka amin'ireo mpanjifany, dia fanampiana ny fahaiza-manaon'ny ITIL. Raha te-hahay handanjalanja ianao, dia tsy maintsy manondro fa ny ITIL-certification dia tsy dia ilaina loatra amin'ny fanokafana noho ny fanamarinana PMP. Ny farany dia malaza be noho ny fomba fandaminana goavana ny asa mazoto sy ny fanomanana azy amin'ny farany.
Na izany na tsy izany, mazava ho azy, ny fanamarinana ny fisafidianana dia ny antony hanorenana ary hiankin-doha amin'ny fiantsoana izay tena manahiran-tsaina anao amin'ny asanao IT. Izany dia miankina amin'ny antony mahatonga ny tsirairay hanana tanjona mitoka-monina ary manolotra tanjona.
Azonao atao koa ny manamarina: -Tetik'asa momba ny fanofanana ITIL
Tokony hikaroka sy hahita ianao fa ny tsirairay dia tokony hanome fahafahana anao hanatratra ny tanjona sy ny fandrosoana amin'ny asa foana. Ocarreer dia manararaotra ny fotoana tsy ahafahanao manome mari-pankasitrahana iray izay mahatonga anao hampiseho fampahalalana amin'ny fitantanana tetikasa mety ho azonao amin'ny ankamaroan'ny dingana mankany PMP.
Na izany na tsy izany, raha toa ianao ka miambina amin'ny fisainana goavana momba ny fitantanana ny serivisy IT dia afaka mandeha amin'ny ITIL, fa tsy PMP. Ireo mari-pankasitrahana roa dia tsy afaka manana lohateny amin'ny fifamatorana amin'ny lohateny satria izy ireo dia manana tanjona manokana sy ny asa an-tsakany. Miankina aminao amin'ny maha-matihanina azy amin'ny IT izany ary amin'ny maha-olona azy, mba hiorina amin'ny fanapahan-kevitra noraisina.
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fahazoana PMP Certification amin'ny 2018 - Study Notes, Tips sy PMP® Exam Update